संघीय गणतन्त्रलाई जोगाउन मैले आफ्नो पदलाई बलिदानी दिएँ : डा.भट्टराई
विलकुल लाग्दैन । किनकी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको प्रक्रिया अलि लामै हुन्छ । अरु देशमा पनि दशकौं, पचासौं, सयौं वर्ष लागेका छन् । हामीकहाँ पनि करिब ७ सालको आसपासदेखि जब लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया नेपालमा सुरु भयो, त्यसलाई हामीले ०६२/६३को आन्दोलनसम्म आइपुग्दा एउटा उत्कर्षमा पुर्याऔं र संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुगेपछि त्यो ८० वर्षको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया मुलतः पूरा भएको छ । यस अर्थमा हामीले यसलाई सकरात्मक ढंगले ग्रहण गर्नुपर्छ ।
डा.बाबुराम भट्टराई, संयोजक- नयाँ शक्ति नेपाल
बाबुरामजीले बिहानै बेलुकै बस्न खान नदिएपछि म बहकिएँ भनेर …?
होइन, बाहिरका कुरा होइन । मेरो नेतृत्वमा भएको चुनावमा उनीहरुले स्वतः भाग लिनु पर्दथ्यो । अर्को कुनै संवैधानिक बाटो नै थिएन । राजनीतिक दलहरुले त्यसमा नमानेपछि र राष्ट्रपतिलाई पनि विभिन्न ढंगले प्रभावित पार्ने प्रयत्न भइसकेपछि मलाई लाग्यो, अब मैले छिटो निर्वाचन गराउनुपर्छ । त्यसको लागि वहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनाव बढी सजिलो हुन्छ भनेर मैले नै हस्तान्तरण गरेको । मैले कहीँ राजिनामा दिएको थिइनँ । खोज्नुहोला तपाईंले । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिईकन अर्को चुनावी सरकार कसरी गठन भयो ? म त आफ्नै जोडबलमा नेपालमा संघीय गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेको मान्छे, यसलाई बचाउन म चाहन्थेँ । त्यसको रक्षाको लागि मैले आफ्नो पदलाई बलिदानी दिएर मैले यो प्रक्रियालाई जारी राखेँ ।
(बीबीसी नेपाली सेवामा ‘लोकतन्त्रको एक दशक’का लागि सुरेन्द्र केसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)